တစ်ဦးလက်ချောင်းနဲ့ပစ္စည်းကော် (ဆိုလိုကော်) တိုးတက်လာဖို့အသုံးပြုတဲ့လက်သည်းပေါ်တွင်အသုံးပြုရန် primer ။ primer အမျိုးမျိုးသော gels ပိုပြီးအရည်အခြေစိုက်စခန်းအသုံးပွုနိုငျအဖြစ်။ သငျသညျပိုကောင်းလက်သည်းအဘို့အ primer အဘယျသို့သော၏မေးခွန်းကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ဖြစ်ကောင်းသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော-ဖော်ပြထားနည်းလမ်းကနေရှေးခယျြရာတှငျ, ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အက်ဆစ် primer 30 ရက်က 100 ရာခိုင်နှုန်း methacrylic အက်ဆစ်ထံမှပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကား primer လက်သည်းပန်းကန်ပေါ် Sears အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေး။ လက်သည်းဖန်းဂတ်စ်ရောဂါများအတွက်အသုံးပြုတဲ့အက်ဆစ် primer အဆီလက်သည်းပန်းကန်ထဲမှာအကြောင်းအရာနှင့်အခါ trampoline ဆင်တူလက်သည်းပန်းကန်ပုံသဏ္ဍာန်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လည်းမီးလောင်စေခြင်းနှင့်အနည်းငယ်အသားအရေကိုမီးရှို့စေခြင်းငှါသကဲ့သို့, လက်သည်းများနှင့် cuticles န်းကျင်အရေပြားပေါ်တွင် primer နှင့်အဆက်အသွယ်ရှောင်ကြဉ်ပါ။ လူသိများခြင်းနှင့်ထိရောက်သောအက်ဆစ် primer - ဖြစ်ပါသည်:
Runail အက်ဆစ် primer;
Kodi Professional က primer;
အက်ဆစ် primer Entity နှင့်အခြားသူများ။
ပုံမှန်သို့မဟုတ်လျှော့ချအဆီ content တွေကိုလက်သည်းပြားများ၏အဆင့်မှာအသုံးပြုသောလက်သည်းအဘို့အအက်ဆစ်-အခမဲ့မေးစရာရှိတယ်။ အက်ဆစ် primer ကျော် 20 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသည်ထင်ရှားလျှင်, သူတို့သည်ရို့ကားမကြာသေးမီကရိပ်မိတစ်ခုခုသည်အထိအက်ဆစ်-အခမဲ့ Analogues ဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့သူတို့နောက်ပြီးနှင့်ခြေသည်းအများအပြားသခင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုအက်ဆစ်၏မရှိခြင်းနေသော်လည်းအက်ဆစ်-အခမဲ့ primer တံစို့နှင့်အပေါ်ယံပိုင်းအကြားတစ်ဦးကို double-တဖက်သတ်တိပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အရေပြားအတွက်အားလုံးလုံခြုံရေးနှင့်အတူ, သေးပါက၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ tool ကို၏အဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ အက်ဆစ်-အခမဲ့ primer ၏ဥပမာများဖြစ်ကြသည်:
Runail အပေါ် non-အက်ဆစ် primer;
IBD သဘာဝလက်သည်း primer;
Gelish အက်ဆစ်အခမဲ့ Pro ကိုဘွန်း;
Nobility PrimeBond နှင့်အခြားသူများ။
အလွန်မကြာခဏအဘို့အ လက်သည်းဂျယ်လ် ဟာလက်သည်းတွေနဲ့ သာ. ကြီးမြတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ဦးအမြင်တို့နှင့်လည်း primer အသုံးပြုကြသည်။ ယနေ့ကမဆိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်မာစတာမပွုနိုငျစရာမလိုဘဲ။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ primer ဂျယ်လက်သည်း acrylic များအတွက် primer ရှိပါတယ်ကွောငျ့, အမည်ရဂျယ်လက်သည်းတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ရှိပါတယ်:
ဂျယ်လ် Giorgio Capachini များအတွက် primer;
ခရမ်းလွန် primer Runail ဂျယ်;
UP 15 Ultrabond primer ယိုအက်ဆစ်-အခမဲ့;
စတူဒီယိုခရမ်းလွန်အခြေစိုက်စခန်းအင်္ကျီ Gel ရွှေနှင်းဆီ။
တည်ဆောက်ရန် acrylic လက်သည်း ဥပမာ, acrylic Runail များအတွက် primer ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလက်သည်းမှ primer ၏လျှောက်လွှာများ Method ကို
လက်သည်းအဘို့အ primer သုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုအဖြေအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကိုယ်ကသာညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်:
အဆိုပါ primer လက်သည်းပန်းကန်၏ defatted ခြောက်သွေ့တဲ့မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားသည်။ degreaser, ပိုးသတ်ဆေး, ရေဓါတ်ခန်းခြောက်: ဤ Pre-အသုံးပြုမှု predpraymer သည်။ လက်သည်းရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ကလက်သည်းပေါ်တွင် primer လျှောက်ထားရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်အချိန်ရောက်လေပြီဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကမှာရှိသမျှကိုလက်သည်းကိုင်တွယ်နှင့် 2-3 လက်သည်းပေါ်မှာဝတ်ဖို့မသည် သာ. ကောင်း၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ primer, သာမိနစ် 40 မှ၎င်း၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
တစ်မိနစ်အဘို့အခြောက်မှခရမ်းလွန်မီးခွက်များအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ primer ။
သူကအထူးဖြီးလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ overspending primer နှင့် cuticle နှင့်အတူ၎င်း၏အဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားရန်, ဒီ tool ကိုအတူတစ်ပုလင်းထဲသို့ဖြီးနှစ်, ကသူမ၏ပိုလျှံဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
စွမ်းရည်အဘို့အ acrylic အက်ဆစ်-အခမဲ့ primer ကိုအသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သငျသညျ primer လက်သည်းအစားထိုးရန်အဘယ်အရာကိုအံ့သြနေကြလျှင်, ရွေးချယ်မှုများ၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ ဥပမာ, လက်သည်းအရက်သို့မဟုတ် acetone နှင့်အတူ degreased နိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကော်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏအတွက်ရှာလကာရည်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအမှု၌က primer စေသည်အဖြစ်အထက်ပါနည်းလမ်းများအဘယ်သူအားမျှခြင်း, လက်သည်းများ၏အကြေးခွံရုတ်သိမ်းပေးရန်မပြနိုင်သောကြောင့်နီးပါးရှိပါသည်လက်သည်းနေဆဲ, ပယ်လက်သည်းနိုငျသောစွန့်စားမှုရှိကွောငျးကိုအောကျမေ့ရပါမည်။ ဒါကြောင့်နည်းပညာကိုတစ်ဦး primer ၏ကြိုတင်လျှောက်လွှာမလိုအပ်ပါဘူးရသော, တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်ပစ္စည်းသုံးစွဲဖို့ပညာရှိဖြစ်လိမ့်မည်။
အိမ်မှာခြေကွာ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ပခုံးပေါ်ဝက်ခြံ - အကြောင်းတရားများ
ခြေပေါ်သွေးကြော - ကုသမှု
ဆားဗတ် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများကိုဆန့်ကျင် Currant ထုတ်ယူခြင်းဆောင်းဦး
အမေရိကန်သမ္မတနေအိမ်၌ဟယ်လို: Donald နှင့် Melania Trump ချိုသောသားသမီးရဲ့အားလပ်ရက်ကိုဖန်ဆင်း
ချိုင်မဆလာ - စာရွက်
ကမ္ဘောဒီးယား, ဖနွမ်းပင် - ဟိုတယ်
Thoracic osteochondrosis - အရာများ၏ရောဂါလက္ခဏာအားလုံးသိကြသည်မဟုတ်
ဂျက်စီကာ Alba မွေးကင်းစသားနဲ့ထိထိမိမိဓါတ်ပုံကို shared